Kooxo badan oo isku heystaan Devid Alaba.
Home Horyaalka Ingiriiska Kooxo badan oo isku heystaan Devid Alaba.
Chelsea ayaa isku dayi doonta inay afduubto tallaabada Real Madrid ee David Alaba kaasoo qarka u saaran inuu si xor ah uga tago Bayern Munich iyadoo Thomas Tuchel uu qorsheynayo inuu xoojiyo difaaciisa xagaagan.
In kasta oo Madrid ay weli ugu cadcad tahay inay la soo saxiixato Alaba ka dib markii ay siisay daafaca heshiis waqti dheer ah bishii hore, Chelsea ayaa diyaar u ah inay gasho tartanka 28 jirkanTuchelcoo bedelay Frank Lampard isla markaana maamule ka ah garoonka Stamford Bridge ayaa qaabeeynaya qorshihiisa kala iibsiga wuxuuna aad u jecel yahay daafaca dhexe ee Bayern devid Alaba.
Alaba oo ku guuldareystay inuu heshiis qandaraas ah la galo kooxda Bayern ka dib 12 sano oo uu la joogay kooxda heysata horyaalka Jarmalka ayaa ka mid ah daafacyada ugu fiican adduunka Rabitaanka Austrianka ayaa sii kordheysa dhowr ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Yurub iyo Madrid, kuwaas oo shaki ka qaba mustaqbalka Sergio Ramos inay ku firfircoon yihiin raadkooda Waxaa sidoo kale jiray xiiso ka timid Liverpool iyo Manchester United
Previous articleImmisa isbuuc ayuu maqnaan doonaa sergio Ramos.
Next articleOle Gunnar Solskjær oo soo jeediyey in Poul Pogba uu saxiixi doono heshiis cusub.